Modular Distribution Bhokisi Vagadziri & Vatengesi - China Modular Distribution Bhokisi Fekitori
Modular Plastiki Empty Yakakomberedzwa YeMCB IP40 (TXM akateedzana) Plastic base
Pakazara dhizaini dhizaini uye inokwezva, kumeso kufukidza mavara nderima girini uye brawn (yakapihwa zvinoenderana neruvara rwezvinodiwa zveakasiyana ekugara ekugadzirwa dhizaini kunze kweiyo akajairika mavara). Dhizaini yekuvhara kumeso kunopa inoshamisa uye yakanakisa kunzwa. kukwezva Ivory, Yakakwirira Simba, haambo shandure ruvara. Transparent zvinhu iPC. Yakagadziriswa furemu, yakapusa chimiro, uye nyore kuiswa.
Modular Plastiki Empty Yakakomberedzwa YeMCB IP40 (TXM akateedzana) Iron Base
SHPN Series Isina Mvura Distribution Bhokisi
Yepamusoro-yekupedzisira bhokisi rekuparadzira, yakazara mapaneru dhizaini yakasarudzika yakaoma inokwezva. Izvo zvinhu iPC inoita kuti ive inodzivirira, isina moto uye inodzivirira UV. Yakagadziriswa furemu, yakapusa dhizaini, uye nyore kuisa. Iyo inoshanda kune yakasarudzika isina mvura, guruva chiratidzo uye ngura-chiratidzo nzvimbo.Executive mwero IEC60529 EN 60309 IP65.
Plastiki Empty Yakakomberedzwa YeMCB IP65 (HT Series) Yemvura Yeuchapupu Distribution Bhokisi
HT Series yekuvhenekesa bhokisi inoenderana neIEC-493-1 yakajairwa, inokwezva uye yakasimba, yakachengeteka uye yakavimbika, iyo inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana senge fekitori, imba yemba, pekugara, yekuchaira nzvimbo zvichingodaro.
MCB yakakomberedzwa (HAG akateedzana)
HAG akateedzana epamusoro bhokisi mhando yeakanaka-kuratidzira diki vhoriyamu, zviri nyore kuisa mune zvehupfumi modular yekuparadzira bhokisi.Iyo inonyanya kushandisa pakuvaka magetsi ekuparadzira sisitimu yekumisikidza, inowirirana uye imba yekuvakazve kukoshesana etc.
Modular Distribution Bhokisi (BE dzakateedzana)
Iyo butiro rakapetwa kaviri uye rakagadzirwa nediki, yakapusa uye inoyevedza chitarisiko.